स्वास्थ्य पेज » दशैंमा कस्तो र कति मासु खाने ? दशैंमा कस्तो र कति मासु खाने ? – स्वास्थ्य पेज
दशैंमा कस्तो र कति मासु खाने ?
नेपालगन्ज ८, कात्तिक ।
अपवादबाहेक नेपाली समाजमा मासुविनाको चाडबाड कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । हिन्दु धर्मावलम्बीको महान् चाड दशैंमा शाकाहारीबाहेक मासु नखाने कमै होलान् । नहुनेले ऋणसापट गरेरै भए पनि दसैंमा मासु खानैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
अन्य समय त छँदै छ तर चाडबाडमा मासु अत्यधिक खाने प्रचलन नयाँ होइन । तर, मासु कति, कसरी र कस्तो खाने भन्ने सन्दर्भमा नेपाली त्यति सचेत छैनन् । मासु खाए पुग्यो भन्नेको बाहुल्य छ । चाडबाडमा मासु खानै नहुने भन्ने होइन ।
कस्तो मासु खाने, कति र कसरी खाने भन्नेले अर्थ राख्छ । मासु भन्नासाथ खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, राँगा, सुँगुर, कुखुरा, हाँस र माछा बुझिन्छ । ‘रातोभन्दा सेतो मासु खान उपयुक्त हुन्छ ।
रातो मासु खानै हुँदैन भन्ने होइन तर मात्रा मिलाएर खान जान्नुपर्छ, भेरी अस्पताल नेपालगन्जका बरिष्ठ फिजिसियन तथा पेट, कलेजो रोग बिशेषज्ञ डा संकेत रिसालका अनुसार ‘मिर्गौलारोगी, कोलस्ट्रोल, युरिक एसिड र रगतमा चिल्लो मात्रा बढी भएकाले रातो मासु खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ ।’
निम्न रोगको समस्या भए मासु नखानुहोस्
मासुका लागि उपयुक्त पशु तथा पन्छीको उल्लिखित अंग नखाँदा स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ । फिजिसियन डा रिसालको बुझाइ छ, ‘हामीले मासुका रूपमा खाने पशु तथा पन्छी रोगी भए उसको अंगमा विभिन्न किसिमका विषाक्त रसायन हुन्छन् । रगतमा अझ धेरै हुन्छ । हामीले मासुसँगै विषाक्त रसायन खाइरहेका हुन्छौं ।’
विषाक्त रसायनले मानिसको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन । रोगी मानिसले त्यस्ता रसायन भएको मासु खाँदा रोगीमाथि रोगी हुन्छन् । कोरोना महामारीमा माछा मासु खानु हुदैन् भन्ने भनाइ छ अस्पतालका कोरोना फोकलपर्सन समेत रहनुभएका डा रिसाल भन्नुहुन्छ–‘सफा, शुद्ध र पेटले पचाउन सक्नेमात्र खानु पर्यो । मासु खाँदैमा कोरोना हुने होइन् ।’
दैनिक माछा मासु कति खाने ?
–रोतो मासु ३ देखि ४ टुक्रा ।
–सामान्य फ्रिजमा राखिएको मासु दुई÷तीन दिनपछि नखाने ।
सामान्य दिनमा आधा एक केजी मासु खाने घर परिवारले चाडपर्वमा तीन चार किलो मासु किनेर खाने गर्छन् । चाडपर्वमा मासुको खपत बढी हुने भएकाले त्यसको गुणस्तरीयता चेकजाँच गर्न डा रिसालको सुझाव छ । मासुको गुणस्तर चेकजाँच गर्ने निकायले शुद्ध मासु मात्र उपभोक्तासम्म पुर्याउन पहल गरिदिने हो भने धेरै हदसम्म मासुबाट हुने समस्या कम हुन्छ ।
मदिरा नखाएकै राम्रो
दशैं भन्नासाथ मासु र मदिराको चाड हो । मासु र मदिराविनाको चाडबाड खल्लो नै हुने भनाइ हाम्रो माझ छ । घरेलुदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मदिरा नेपालमै पाइन्छन् । फ्रान्स, स्कटकल्यान्ड र बेलायतका मदिरा नेपालमै बिक्री गरिन्छ । ‘मदिरा स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुनै सक्दैन् । डा रिसालका अनुसार, क्षणीक रमाइलोले मदिराको अधिक प्रयोग भयो भने ज्यानै जान सक्छ ।
८ कार्तिक २०७७, शनिबार प्रकाशित